बजैहरुको महरे यात्रा - Punhill Onlineबजैहरुको महरे यात्रा - Punhill Online
बजैहरुको महरे यात्रा
२६ जेष्ठ २०७६, आईतवार १६:३६ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि)
म्याग्दी, २६, जेठ ।
विदेशी पर्यटक त बुढ्यौली उमेरमा पनि घुम्न आएका देखेकै छौं तर कहिल्यै हाम्रा गाउँघरका बुढी वजै र आमाहरु हिमाल, चराचुरुङ्गी र घाम झुल्केको हेर्न डाँडाकाडा डुल्न निक्लेको देख्नु भएको छ ? सायदै देख्नु हुन्छ । न हाम्रा बाजेबजै यसरी डुल्न निक्लेका छन ।
नेपाली समाजमा बुढ्यौली उमेरमा घरमै कुँजिएर बस्ने चलन । पाका उमेरका पुरुष कि चौतारीमा गफ गर्ने कि जुवा खालमा दिन विताउँछन । बजैहरु नातीनातिनाका हेरालु हुन्छन । घुमघाम गर्ने संस्कृति नै छैन ।
तर म्याग्दी राम्चेका हिक्मतिला बजैहरुले भने पाहुना हिँड्ने बाटोमा पदयात्रा गरेका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ८ राम्चेका ७८ बर्षिया नन्दकुमारी पुर्जा, ७६ बर्षकी पैसु खोरजा, ७१ बर्षकी मंगा पुन, ६६ बर्षिया दानकुमारी खोरजा र ६४ बर्षकी रती पुर्जा जेठ २१–२३ गते वुढ्यौली उमेरमा पनि ३ हजार ३ सय १३ मिटर अग्लो भ्यू पोइन्ट, महरेडाँडाको पदयात्रा गरेका हुन ।
मगर जातीको बसोबास रहेको साँस्कृतिक गाउँ राम्चे/नागीबाट ४ घन्टा जंगलको उकालो बाटो हिँडेपछि धिमाको डाँडा (हम्पाल) र थप ३ घन्टा उकालो चढेपछि महरेडाँडा (३३१३ मि.) पुग्न सकिन्छ । महरे डाँडाबाट अन्नपूर्ण–धौलागिरी हिमालय रेञ्जका सवै हिमालहरु पानोरोमिक भ्यू देख्न सकिन्छ । यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृष्य देख्न सकिन्छ । पर्यटन विकास सरकार र ब्यवसायीले मात्र होईन, समुदाय आफैले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो, म्याग्दीको अन्नपूर्ण–धौलागिरी सामुदायीक पर्यापदमार्ग । महरेमा चौरी र स्थानीय गाईको व्रिडिङ गरिन्छ । यो गुराँसे जंगलको विचमा छ । मनसुन यात्राका वेला यहाँ निगालाको टुसा र रातो च्याउ खाना पाईन्छ ।
‘दैलो अघिल्तिरबाट गोराहरु (पर्यटक) घर्याप घर्याप डाँडामा उक्लेको देख्दा के हेर्न जाँदा हुन्, यिनीहरुले खाने कुरा कस्तो हुँदो हो भन्ने लाग्थ्यौ । मर्नु अघि यो डाँडामा उक्लने रहर लाग्यो’ महरेडाँडामा उक्लेकी रती पुर्जाले भनिन, ‘जुकाले त सँधै टोकेका थिए, तीन दिन हिँड्दा खुट्टा दुख्यो । हिमाल र घाम झुल्केका रमाईलो देखिने रहेछ ।’
बजै पर्यटकलाई गोरा (विदेशी पर्यटक)ले हिँड्ने बाटो हिँड्न, हेर्ने ठाउँ देख्न र होटलमा बस्न र पर्यटकले खाने परिकार पनि चाख्ने चाख्ने रहर रहेछ । बुढी बजैहरु पाहुना आएपछि होटलले पनि सत्कार गरेको छ । बजैहरुको रुची अनुसारको खानाका परिकार खुवाएको छ । बजै पर्यटकलाई होटलले पनि सुपथ मुल्यमा मेन्यू दियो । खाना छाकको ५० रुपैयाँ, वेडको रु ५० मात्र ।
‘वर्खाको सिजन, निर्जन जंगलको एक्लो होटलमा साँझ बुढी आमाहरु पाहुना आउँदा सुरुमा हामी पनि छक्क पर्यौं । चिसो ठाउँ भएकोले स्मोक हिटर बालेर न्यानो बनयौं, तातोकफीले सत्कार गर्यौं । गोराले खानेकुरा ल्याउ भन्नु भएकोले एप्पल पाई र पिज्जा बनाई खुवायौं’ महरे सामुदायीक लजकी कुक पोकमायाँ पुर्जाले भनिन, ‘एक दिन साईट सिन गरायौं । फर्कदा नयाँ बाटो हिंड्न चाहनु भएकोले झुक्किन सक्ने स्थानसम्म गाईड पनि गर्यौं ।’
तेस्रो दिन बजैहरु महरेबाट ब्रेकफास्टगरी ३ घन्टा ४० मिनेटमा (सामान्य २ घन्टा) ओरालो हिँडेर डाँडाखर्क/फुलवारी (२८२० मी)मा झरेका थिए । फुलवारीमा पनि सामुदायीक लज छ । लजमा दालभात खाएर थप ३ घन्टा ओरालो हिँडेर राम्चे स्थित घर फर्के । गाजोमा सातु र रोटी बोकेर मनसुनी पदयात्रामा निक्लेका बजैहरुले घर फर्कदा भने लेकाली धेरथोर रातो च्याउ, टुसा कोसेली बोकेर फर्केका थिए ।
नेपाल सरकारले महरे पदमार्गलाई एक सय नयाँ गन्तब्यमा समावेश गरेको छ । महरेमा ३० बेड क्षमताको सामुदायीक लज छ । यस बर्ष सरकारले पदमार्ग तथा होटल पूर्वाधार सुधार गर्न दिएको ५० लाख रुपैयाँ अनुदानबाट ४० बेड क्षमताको लज तथा छुट्टै २० बेड क्षमताको गाईड/पोटर हाउस निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
महरे पदमार्ग क्षेत्रका बस्तीमा घरबास (होमस्टे), सामुदायीक होटल/लज उपलब्ध छन । सामुदायीक पदमार्ग प्रविधी मैत्री छ । सवै क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध हुन्छ । चरा अध्ययन गर्न चाहने पर्यटकहरुकालागी महरे थप आकर्षण हो । परम्परागत पर्यटनबाट निश्चित ब्यक्तिबाहेक समुदायले कुनै लाभ लिन नसकेपछि गाउँलेहरुले पर्यटककालागी पदमार्ग संञ्चालन गरेका हुन । पदमार्ग प्रविधी मैत्री छ ।
बाढीपहिरोमा तीन जनाको मृत्यु, ३१ जना वेपत्ता, ४३ घर पुरिए, उद्धारकर्मी घट्नास्थल पुग्न सकेनन्, पीडितको अवस्था नाजुक
प्रेमिल जंगलमा ‘सेक्सी सुनगाभा’
पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन कोभिड–१९ अपरेसनल गाइडलाइन सार्वजनिक
७१ बर्षपछि शुन्य रह्यो अन्नपूर्ण हिमाल
बास नपाएर अलपत्र चिनियाँ पर्यटकको उद्घार
गाँजालाई बैधता दिँदै सरकार
म्याग्दीका पहिरोमा परि ३३ जना वेपत्ता, ३५ घर पुरिए, कम्तीमा ७० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो, अझै उद्धारकर्ता घट्नास्थल पुग्न समस्या
म्याग्दीका विभिन्नस्थानमा पहिरोले ९ जना वेपत्ता, ५ घर पुरिए, गलेश्वरको वेलीव्रिज भत्क्यो
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने सरकारको निर्णय
भारतीय सञ्चारमाध्यम बकबासपूर्ण : पत्रकार महासंघ
पोखरालगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा, नदीहरुमा बहाव बढ्दो
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने दाहालका १० प्रयास !